Musharaxiinta Madaxweyne oo ku soo wajahan Maanta Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Musharaxiinta Madaxweyne oo ku soo wajahan Maanta Muqdisho
Musharaxiinta Madaxweyne oo ku soo wajahan Maanta Muqdisho
Waxaa maanta oo khamiis ah lagu wadaa in Muqdisho ay soo gaaraan inta badan Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood ku maqan ee safarad dibada ah.
Wararka ayaa tilmaamaya in shirar ay yeelanayaan Musharaxiinta Madaxweynaha, waxaana ay ku dhawaaqi doonaan Gole ay ku mideysan yihiin.
Musharixiinta la filayo in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid Xasan Cali Kheyre R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cabdi Kariim Xuseen Guuleed oo ahaa madaxweynihii hore ee Galmudug, Daahir Maxmauud Geelle iyo Cabdi raxmaan Cabdishakuur Warsame iyo musharaxiin kale.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in mucaaradka ay qaadici doonaan guddiga doorashada ee ay Xukuumadda soo magacowday, sidoo kale waxaa ay sameyn doonaan qorshayaal barbar socota kuwa dowladdu u qaaday hannaanka doorashada Somalia.
Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta mucaaradka, gaar ahaan musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha Somalia ayaa magaalada Muqdisho ka wada ololo xoogan, iyaga oo shirar siyaasadeed ka bilaabi doona magaalada, maadaama arrintaan horey ay uga digtay dowladda federaalka Somalia.
Doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021 ayaa ah mid xasaasi ah, islamarkaana isha lagu wada haayo, waxaana haatan muran ka jiraa Guddiga doorashada ee ay magacawday Xukuumadda federaalka Somalia , kaasoo ay ka hor-yimaadeen Musharaxiintii mucaaradka ah.
Maqaal horeDowladda Soomaaliya oo ka laabatay war ay ka soo saartay mowqifkeeda dagaalka Itoobiya
Maqaal XigaSawirro:Kulan looga arrinsanayo dhismaha Garoonka K/Cagta Galkacyo oo ka dhacay Magaladaasi